EMBA spol. s Ro Paseky nad Jizerou - Umculo wamahhala kunye nokulandwa kwemidiya yevidiyo zakho ze-YouTube okanye iiprojekthi ze-multimedia
EMBA spol. s ro Paseky nad Jizerou	Ushiye uluvo
EMBA spol. s ro yinkampani yaseCzech emngceleni phakathi kweeNtaba zeGiant kunye neJizera Mountains. Ukuqala kwembali amakhadibhodi Paseky nad Jizerou ukuya kunyaka 1882, xa kwakukho abazalwana Rösslerovými waseka-mveliso yeemveliso ezenziwe emhlophe ngekhadibhodi sopakisho kushishino njengokwasesipilini kummandla Jablonec. Ukwandiswa kweprogram yokuvelisa kunye neendawo zokuvelisa kubonakaliso kwixesha lonke lobomi benkampani.
Iimpawu ezibaluleke kakhulu kwimbali yevenkile yeefestile ngokuyinhloko ukufakwa kwamashishini ekhadibhodi ngokuzenzekelayo kwi-1970 kunye ne-1989 iminyaka, eyabangela ukwanda okwenziwe kwimpumelelo yokuvelisa. Kwiminyaka engamashumi ama-90 ekhulwini lama-20, phantsi kwe-brand ye-EMBA, ukuphuhliswa kwezinto zokugcina izithuba zokugcina iincwadi zokugcina iinkcukacha kunye neenkcukacha zenkcubeko kunye neembali ezibalulekileyo zaqala. Kwi-millennium entsha, iipotifoliyo zokuvelisa zazaliswa yimigca yokuvelisa i-office lever archives.
I-EMBA yinkampani yaseCzech enekcubeko elide kunye neendlela ezithintekayo kuluntu nakwiimeko. Iimveliso zayo zendalo ziveliswa ngokucwangciswa kwephepha kwaye ziphinda zenziwe kwakhona. Ngeemveliso zayo ze-EMBA, ikwabanceda ekukhuselweni nasekugcinweni kwelifa lemveli kunye nelifa lemveli kumazwe amaninzi. Njengomqeshi omkhulu wengingqi, unembopheleleko yokuphuhlisa izimo zokusebenza ezizinzileyo kunye ezikhuselekileyo kubasebenzi bakhe, kunye nokuzibophezela ekunikeni inxaxheba ekuzinzileni kwintlalo yommandla wonke.
Paseky nad Jizerou Ingingqi yasentabeni kwisithili saseSemily, kwingingqi yaseLiberec, entshonalanga yeMimount, emngceleni weMizera yaseJizzera, kwicala lasekunene leMayini yaseJizzera. Abemi be-252 bahlala apha; inani lezindlu kunye nezinye izakhiwo zikhonza namhlanje ukuhlala kweholide. Inxalenye esemantla kamasipala ingeNkqantosi yeSizwe yaseKronoše, inxalenye esezantsi kuquka neendawo zokuhlala eziphezulu kwiiNtaba zeJizera eziKhuselekileyo.
Ukukhankanywa kokuqala kwidolophana kuvela kwi-1713.
Idolophana mhlawumbi isekelwe kwi-16. Nangona kunjalo, irekhodi lokuqala livela kwi-1654. Indala endala yayinguKovv, apho iiglasi zazikho ngelo xesha, kunye neHavirna, apho isilivere yachithwa khona. Njengoko ixesha lihamba, amahlathi ayebuyela kwiindawo ezenziwa ngabantu, kwaye izikhelo ezintsha zavela kwimicumba emitsha, abemi bayo, eneneni, abacebisi. Amatye avela kwiindawo ezisemaphandleni asekuqaleni zigxilwe kwiimfumba ezinamhlanje.
In 1789 ibandla kwakhiwa kunyaka 1791 waba Pasekách waqalisa isikolo rhoqo. Le revivalists kazwelonke yesikolo bafundisa, cantor Josef Simunek kunye nomncedisi wakhe Věnceslav Metelka ababa lwabasunguli zizityebi umculo, imidlalo yeqonga, ubomi loncwadi kunye jikelele yenkcubeko lali. Věnceslav Metelka njengento autodidact abaqeqeshiweyo ivayolin umenzi nisekelwe isithethe izinyanya ivayolin kwezigqibo, kwavela ekuthiwa-Giant yevayolin yesikolo apho, kodwa siphila kwihlabathi kwisizukulwana Pilar Špidlen kunye Vedral. Emva kweMfazwe Yehlabathi II ngexesha noopopayi isithethe somculo Pasecký Utitshala ivayolin František Vedral, kodwa emva kwexesha ngamahlanu band yeqonga engahlawulwayo shwaka. Ngee-1970 ii-20. Inkulungwane yayisebenza kwidolophana necawa yaseSt. Vaclav Pater MUDr. Ladislav Kubíček. In 1980 yasekwa liSebe Church of ikwayari St Wenceslas Choral Society, ekungoku zamalungu 30 ukususela 1990 Paseky ngonyaka cwangcisa neminyhadala yomculo; i-orchestra yowowubhoyi yenza amaculo omculo.
Idolophana yimiba yencwadana eyiyo ka Karel Vaclav iphakamisa uZapadlí vlastenci. Isalathiso sakhe sisetyenziswe kwi40. 19. inkulungwane, kunye noPaseky ubizwa ngokuba nguPozdětin, uRais ukhankanya imemori yeememori zikaMetel, umsebenzi oxabisekileyo womculo womculo.
Impumelelo enkulu yayiyiPaseky kwi-1869, xa i-212 ibhaliswe apha ngeenombolo ezichazayo kunye nabemi be-1710. Emva koko umhlala-phantsi wabuyela ngokukhawuleza. Nangona ukuba iindawo zokuhlala zasePasek zaziphantse kuphela kwiCzech, iSivumelwano saseMunich sasihlanganiswe neJamani njengenxalenye yeSudetenland. Ngaphandle kokuba abemi basePasek bengabandakanye ngqo ukuxoshwa kwemfazwe emva kweemfazwe zamaJamani, kwakukho ukuhla kwenani labantu abanomphela kwaye ininzi yezindlu zokuhlala zathengwa ngabahlali beeholide. Izidlo ekunyamekeleni kwipulazi yaseburhulumenteni zonakaliswe ngandlela-tya, kwaye zinyanzelwanga. Kwi-1979, isikolo saxoshwa kwi-Paseky.
Isithili sipala: ivenkile yokutya kunye nomhlalaphantsi uNa Buďárce, iofisi yokuposa kunye neofisi kamasipala. Ngakwesokudla yiSikhumbuzo seZapadly Patriots kwicawa yangaphambili, emva kweCawa yaseSt. Wenceslas.
Ubunye be-Sokol Gospel Ubunye busekelwe ePaseky ngonyaka we-1896. Kwiminyaka 1936-1938 wayekunye družebního encinane eyakhelwe Sokol Sokol, emva kwemfazwe yaba liziko namasiko. Inkundla yemidlalo yendalo yakhiwa kwihlathi kwiSokol House. Luvuthondaba kwimisebenzi yaba ushicilelo yokuqala neyokugqibela veke umculo yeqonga festival Paseckého 1952, emva kokuba imisebenzi korhulumente wamaKomanisi Sokol wama kwaye kwakukho ukuhla jikelele wobomi ekuhlaleni. I-Sokol House yatshisa umnyaka we-1967, xa yayiqeshwe yi-Czechoslovak Army. Okwangoku (2008) yakule TJ Sokol zamalungu 100 kunye ujongene kunye nemidlalo, umculo kunye nokhenketho imisebenzi, imibutho iinkampu zasehlotyeni sabantwana, inxaxheba ekucoceni lali njalo njalo.
Ukususela kwi-1888 e-Paseky, kuye kwaye kwaba ngumlilo ovolontiya. Kwixesha elidlulileyo, abacimi bomlilo basekhaya bahlele iibhola kwaye badlala ithala lezemidlalo kwi-Pub Sou Upu, kamva kwi-Houslairs Inn. Kwi-1931, i-fire brigade yenza i-choir eyahlukeneyo ukusuka eHairna.
Ukongezelela, ukususela ngonyaka we-2010, i-community association yase-Paseky yangaphandle isasebenza kwidolophana, eququzelela imidlalo yendawo kunye neemeko zenkcubeko.
Ukususela kwi-1976 ukuya kwi-1990, iPaseka yayingekho umasipala ohlukeneyo kodwa inxalenye yayo Rokytnice. Ku-1991, uPaseky wasayina kwiNkqubo yokuHlola yaseMaphandleni kwaye phantsi kwesi cwangciso iSicwangciso soMhlaba seSebe loLawulo Paseky nad Jizerou.
Kwidolophana kukho imithi ye-FUKNER sro, umvelisi wekhadibhodi kunye nekhadibhodi yokupakisha i-EMBA sro kunye neefama zeefama zezilwanyana.
Umlando wendawo uzinikezelwe kwiMyuziyam yeZapadly patriots ekwakheni elinye ibandla laseParish, eduze kweCawa yaseSt. Wenceslas kunye nendawo yokudlela yaseNa Buďárce. Iimyuziyamu zinikezelwa kumsebenzi we-violinist kunye nomlobi uVěnceslav Metelka kunye nomlobi uKarl Vaclav Rais, ubomi beenduli zendawo kwi-19. kwenkulungwane, i-violin kunye nokuluka. Isikhumbuzo sagqitywa kwi-1958 kumgangatho womgangatho weparishi, unyaka we-1975 wabuyelwa kwakhona ngokwemeko ye-PhDr. UJaromir Jech, onguchwepheshe kunye nommemezeli womsebenzi kaMetelka. I-1978 yongezwa kumgangatho ophezulu. Iimyuziyam njengamanje ziphantsi kolawulo lwe-Krkonoše National Park.
Idolophana yenziwe ngeendawo eziliqela kunye neendidi zeentaba zentaba zisasazeka. Wonke umasipala uquka enye indawo yomhlaba. Iinqununu zokuqala zokuhlala zibhaliswe ngokubhaliweyo kumasipala ezintathu: Paseky nad Jizerou, Havirna kunye no Makov. Havírna ngumcu iyihlawule entilini Havírenského ngumsinga ukuya ezantsi top Hromovka entla top Mechovice (803 m), kwaye iquka kweendawo zokuhlala zasezintabeni, Piave, Lomička, ndiwatshise njl Makov amatyotyombe emazantsi kamasipala entilini Makovského potoka. Kumntla inxalenye dolophu, kunye iilifti ski eziliqela namathambeka, ekuthiwa Hořensko, iqela izindlu kwicala elingasempuma yenduli Javorníka (822 m) ubizwa Tomšová. Endleleni kufuphi neTomšov kukho ipapasho yasendulo i-Na Perlíčku okanye i-Na Pldek. Le lali luquka kwindawo enehlathi (ikakhulu amahlathi nespruce) ngasentla imigodi, kunye neenduli Hromovka (916 m) White Rock (kufutshane 957 m phezulu, kwisiza elalini unika 964 m) kunye Kapradník (910 m) kunye nokuhlaliswa Bathi bathathwa kwi-Valley yeJizzera. Indawo ephantsi kunazo zonke iJizera, 476 m
Le lali ezikufutshane entshonalanga kunye noomasipala Zlata Olesnice kwaye ingcambu (k. U. Rejdice, Dul kunye Polubný) indawo kumntla umzi Jizerou Harrachov, emimandleni yokukhanya kunye kummandla Jizerou Rokytnice (Dolní Rokytnice), ngasemzantsi kunye nommandla we dolophu yaseVysoké nad Jizerou (kufuphi neSklenařice) kunye nedolophu Jablonec nad Jizerou.
Vitkovice kwi kwiiNtaba →